Samachar Batika || News from Nepal » मास्क बेच्दै ८ वर्षीय प्रेन्सा,भन्छिन काम गर्नु केको ला’ज ? चो’र्नु–ढाँ’ट्नु पो भएन
मास्क बेच्दै ८ वर्षीय प्रेन्सा,भन्छिन काम गर्नु केको ला’ज ? चो’र्नु–ढाँ’ट्नु पो भएन
पोखरा । उमेरले सानी तर प्रतिभा अनेक । पोखराकी प्रेन्सा रेग्मी उमेरले मात्र ८ वर्षकी भइन् । कक्षा ३ पढ्छिन् । उनको बहुप्रतिभा ४ महिना लामो ल’कडाउनमा निकै खुलेर आयो । विद्यालय जानबाट व’ञ्चित उनीजस्तै बालबालिका प्रेन्साको प्रस्तुति एवं सहयोगी भावबाट प्रेरित बने ।
तपाईँ पोखरा–१७, बिरौटा पुग्नुभयो भने प्रेन्सालाई मास्क बेचिरहेको भेट्नुहन्छ । उनले केही सातायता आफ्नो घर नजिकै चौतारोमा बसेर मास्क बेच्ने गरेकी हुन् । को’रोना भा’इरस (कोभिड–१९) संक्र’मण जो’खिम न्यूनीकरणका लागि सर्वसाधारणलाई मास्क बेचेर बचेको पैसा उनले सामाजिक सेवामा लगाउँछिन् । सरकारले पनि यतिखेर अनिवार्य मास्क प्रयोगमा क’डाइ गरेपछि मास्क को’रोनाबाट बच्न अनिवार्य साधन बनेको छ ।
आयआर्जन कमजोर रहेका परिवारका आफूजस्तै उमेरका साना भाइबहिनीको लागि उनले बचत रकम सहयोग गर्ने गरेको बताइन् । यी सानी बालिकाले भनिन्, ‘को’रोनाले धेरैजनालाई दुःख भएको छ । कति धेरैले आफूले चाहेको बेलामा खान पाउनुभएको छैन । कापीकलम किताब किन्न पाउनुभएको छैन । उहाँहरुलाई हेल्पको लागि मैले यस्तो काम गरेकी हुँ ।’
दह्रिलो आत्मविश्वास बोकेकी प्रेन्सा भन्छिन्, ‘काम गर्नु केको ला’ज ? चो’र्नु–ढाँ’ट्नु त भएन । सबैजनालाई सानोठूलो नभनी काम गरे देशको उन्नति हुन्छ ।’
विद्यालयको प्राथमिक तहअन्तर्गत संयोजक खीमकुमारी शर्माले गएको केही महिनाअघि मात्र उनको क्षमताबारे भेउ पाइन् । को’रोना महा’मा’री आउनुअघिको कुरा हो, विद्यालयमा पढाइका अलावा नियमितरुपमा अतिरिक्त क्रियाकलाप हुँदै थियो ।
त्यसको अझ प्रष्फुटन हुने अवसर पायो, लकडाउनको फुर्सदिलो समयमा । लकडाउनले घरभित्रै खु’म्चिनुपर्दा समय पनि पर्याप्त रह्यो । प्रेन्साले पनि दाजु र बुवाको सहयोगमा मोवाइलमा विभिन्न भिडियो खिचेर फेसबुकमा पोष्ट्याउन थालिन् । यूट्वमा अपलोड भए भने टिकटक पनि बन्दै गए ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीति, को’रोना भा’इरस म’हामारी, नेपाल–भारत सीमा वि’वाद, वैदेशिक रोजगारी, गाउँघरमा बाँ’झो बन्दै गएको खेतबारी, दुःखी गरिब र मजदूरको पी’डा व्यङ्ग्यात्मक शै’लीमा भिडियो बन्दै गए ।
सरोकारवालालाई समेत घ’च्घच्याउने खालका उनको भिडियो आफन्त, साथी, विद्यालय गुरुवर्ग, इष्टमित्र तथा छरछिमेकले धमाधम सेयर गर्न थाले । मानौं उनी एकखालको ‘भा’इरल’ भइन् । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका स्थायी घर भएको रेग्मी परिवार छोरीको प्रतिभा देखेर दंग छ । बाबु रामकृष्णले युट्वमा ‘प्रेन्सु अफिसियल’ नामक च्यानल खोलिदिएका छन् ।
सबै उनलाई कण्ठस्थ आउने गरेको यूट्वमै देख्न सकिन्छ । सानै उमेरदेखि नै फरक क्षमता देखेका उनले छोरीले भविष्यमा लय समात्नेमा उनी ढुक्क छ । लकडाउन बेलामा घरमा बस्नुपर्दा छोरीको कला अझै निखार आएको देखेका उनले हरेक भिडियो सेयर गरेर सहयोग गर्छन् । छोरीको कला देखेर केही मिडिया पनि खोज्दै आएको उनले बताए ।
आमा जयन्ती. पनि सानैदेखि प्रेन्साको स्वभावबारे पूरापूर जानकार छन् । भनिन्, ‘छोरीको आफूले मात्र नखाने अरुलाई पनि केही दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने स्वभाव छ । निकै ज्ञानी र बुझक्की छ । दोस्रो सन्तानको रुपमा यति राम्री छोरी पाएकोमा निकै खुसी छु ।’
श्रोत: आदर्श समाज/विजय नेपाल
प्रकाशित मिति ८ श्रावण २०७७, बिहीबार १३:२७